Lambarkee Ayuu Erling Haaland U Xiran Doonaa Manchester City? - Laacib
HomeWararka CiyaarahaLambarkee Ayuu Erling Haaland U Xiran Doonaa Manchester City?
May 25, 2022 Saed Mohamed
Pep Guardiola ayaa labo weeraryahan soo xerogeliyay xagaagan iyadoo Manchester City ay la soo wareegtay xiddigii Borussia Dortmund Erling Haaland halka ay bilo ka hor ku dhawaaqeen saxiixa Julian Alvarez oo uga imaanaya River Plate.
Erling Haaland ayaa dhaliya 85 gool 88 kulan oo Bundesliga ah uu u saftay kooxda Borussia Dortmund.
Weeraryahanka reer Norway ayaa City u saxiixa qandaraas shan sannadood ah isagoo noqonaya gooldhaliyihii ugu weynaa ee City u ciyaara tan iyo markii uu Sergio Aguero ka tagay sannadkii hore.
Aabaha Erling Haaland oo lagu magacaabo Alf-Inge Haaland ayaa 47 kulan u saftay Manchester City labo xilli ciyaareed uu u dheelay intii u dhaxeysay 2000 iyo 2003, wuxuuna u xirnaa kooxda maaliyda No.15.
21 jirkaan ayay suurtogal tahay inuu kooxda u xirto maaliyadii uu aabihiis u xiran jiray.
Eliaquim Mangala ayaa ahaa xiddigii ugu danbeeyay ee Man City ee xirta maaliyada No.15 iyadoo Jesus Navas, Stefan Savic, Javier Garrido ay hore u soo xirteen.
Lambaro badan ayaa ka banaan Manchester City oo uu dooran karo Erling Haaland waxayna kala yihiin 4, 12, 15, 18, 19, 24, 28, 29 iyo 30.
Si kastaba, maaliyada No.23 ma ahan mid la heli karo ka dib markii Manchester City ay howlgab ka dhigtay markii uu geeriyooday Marc-Vivien Foe.
Gabriel Jesus ayaa haatan xiran maaliyada No.9 inkastoo xiddiga reer Brazil lagu xamanayo inuu ka tagayo kooxda xagaagan, taasoo fursad u noqon karta Haaland inuu xirto maaliyadaan oo uu sidoo kale u xirnaa Dortmund.
Weeraryahanka halyeeyga ah Sergio Aguero ayaa xirnaa maaliyada No.10 tan iyo markii uu baxay Edin Dzeko sannadkii 2015, si katsaba Jack Grealish oo 100 milyan ginni ugu soo wareegay City xagaagii hore ayaa dhaxlay lambarkaas.